ချစ်ရအောင်: Marquee ကုဒ်လေးတွေ နဲ့စာလဲရေးမယ် ပုံလေးလဲ ပြေးနေမယ်
Marquee ကုဒ်လေးတွေ နဲ့စာလဲရေးမယ် ပုံလေးလဲ ပြေးနေမယ်
ဒါပေမယ့် .. ကုဒ်အသစ်ဆိုပါတော့
အပေါ်က စာတမ်းနှစ်ခုရဲ့ ရွေ့လျားဟန်ကိုကြည့်လိုက်ရင် တစ်ခုနဲ့တစ်ခု နှုန်းမတူတာကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်
တစ်ကယ်တော့ marquee တွေဟာ အမှန်တစ်ကယ် ရွေ့ထားတာမဟုတ်ပဲ စာသားတွေ image တွေကို တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို ခုန်( jump ) လုပ်ခိုင်းလိုက်တာပါ
သာမာန် marquee တွေက တစ်ကြိမ်ခုန်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်က
အလိုက်သင့်ထပ်ခုန်တဲ့အတွက် ရွေ့လျားမှုတွေက အစဉ်မပျက်သလို ဖြစ်နေတာပါ .. အဲဒါက သီးသန့် သတ်မှတ်မပေးတဲ့အခါ Default အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါ
Jump လုပ်တဲ့ တစ်ကြိမ်နဲ့ တစ်ကြိမ်ကြားက ကြာချိန်ကို scrolldelay လို့ ခေါ်ပါတယ် . scrolldelay အတွက် value ကတော့ တစ်စက္ကန့်ကို "1000" ဖြစ်ပါတယ် .. စက္ကန့်ဝက်လောက်ကြာမှ နောက်ထပ် Jump လုပ်စေချင်တယ်ဆိုရင် scrolldelay="500" လို့ထားရမှာပါ ..
အပေါ်က စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကို ကျွန်တော်က ဒီလိုရေးလိုက်တာပါ
<marquee scrolldelay="500"><font color="blue">အဆင့်တစ်ဆင့်တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး</font></marquee>
ဒါက အပေါ်ကစာကြောင်း .. အောက်ကစာကြောင်းအတွက်က ဒီလိုရေးလိုက်တာ
<marquee scrolldelay="1000"><font color="red">ဒါပေမယ့် .. ကုဒ်အသစ်ဆိုပါတော့</font></marquee>
scrolldelay ကိုဘယ်အချိန်မှာ အသုံးပြုလေ့ရှိလဲဆိုတော့ စာကြောင်းတွေ (ဒါမှမဟုတ်) ရုပ်ပုံတွေ တစ်ခုမက ယှဉ်ပြီး ရေးပြချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာ သုံးပါတယ် .. ဥပမာ- စာသားတွေ မိုးရွာသလို ပြုတ်ကျလာတာမျိုး .. စာတမ်းလေးတွေ ပုံလေးတွေကို ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ပြေးခိုင်းတာမျိုးတွေပေါ့
ခွီး.. ဆေးလိပ်အရက်တော့ နားသင့်ပြီ
ဟိဟိ .. ဟိုနှစ်ကောင်တော့လစ်ပြီ
အင်း .. ငါတော့ရှုံးပြီ
ကဲ .. အပေါ်ကလိုမျိုးဖြစ်သွားအောင် ကျွန်တော် ဒီလိုရေးလိုက်ပါ
<marquee scrolldelay="300"><font color="red">ခွီး.. ဆေးလိပ်အရက်တော့ နားသင့်ပြီ</font></marquee><br />
<marquee scrolldelay="100"><font color="blue">ဟိဟိ .. ဟိုနှစ်ကောင်တော့လစ်ပြီ</font></marquee><br />
<marquee scrolldelay="600"><font color="green">အင်း .. ငါတော့ရှုံးပြီ</font></marquee>
Ps. ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ <br /> ဆိုတာတွေက စာကြောင်းတွေကို ခြားခိုင်းထားတာပါ
ကဲ .. နောက်တစ်မျိုး ..
ဒီတစ်ဆင့်မှာတော့ marquee တွေမှာ ပုံတွေကို အသုံးပြုမယ့် ကုဒ်ပါ ..
ဒါကိုမလုပ်ခင် .. အရင်ဆုံး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံကို (.jpeg, .png, .gif .. ကြိုက်တဲ့ဖိုင် Format ရတယ်) အဲဒါကို Photo and video hosting ဆိုဒ်တစ်ခုခုမှာ Upload လုပ်ထားပြီး အဲဒီပုံရဲ့ Direct Link ကို ယူထားရပါတယ် ..
marquee မှာထည့်သုံးဖို့ Image အတွက် ကုဒ်ကတော့
<img src="ပုံရဲ့ Direct Link (URL)"
ဒါပါပဲ .. အဲဒီမှာမှ ကိုယ့်ပုံရဲ့ အရွယ်အစားကို ကန့်သတ်ချင်တယ်ဆိုရင် အဲဒီကုဒ်ရဲ့နောက်ကနေ
height="x" width="x" ဆိုပြီး ကန့်သတ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ .. အောက်ကနမူနာကိုကြည့်ပါ .. အဲဒီမှာ ကျွန်တော်သုံးထားတာက ကျွန်တော့်ရဲ့ Post တွေကို တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားထားတဲ့ Divider ရဲ့ ပုံလင့်ပါ ..
အဲ .. ပုံရဲ့အရွယ်အစားကို မကြိုက်လို့ ပြောင်းချင်တယ်ဆိုပါစို့ .. ဒီလို ဖြည့်ပေးလိုက်မယ်ဗျာ
<marquee><img src="http://i1340.photobucket.com/albums/o733/itmotesoee/Label/diver.gif" height="40" width="80"></marquee>
အဲဒီတော့ အောက်ကအတိုင်း အရွယ်အစားတွေ ပြောင်းသွားရော
အဲဒီပုံမှာမှ စာလေးဘာလေး ကပ်ရေးချင်တယ်ဆိုလည်း လွယ်ပါတယ် ..
<marquee>ဒါပဲပေါ့ဗျာ<img src="http://i1340.photobucket.com/albums/o733/itmotesoee/Label/diver.gif" height="40" width="80"></marquee>
အဲဒီကုဒ်ရဲ့ ရလာဒ်က အောက်ကအတိုင်း ဖြစ်သွားမယ် .
စာကို ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့နေရာမှာ ပြောင်းထည့်ပေးရုံပါပဲ .. ကဲ .. အောက်ကပုံကိုကြည့်
<marquee><font color="blue">ဒါပဲပေါ့ဗျာ</font><img src="http://i1340.photobucket.com/albums/o733/itmotesoee/Label/diver.gif" height="40" width="80"><font color="red">မခက်ပါဘူး</font></marquee>
ကဲ .. ဒီပို့စ်ကိုတော့ ဒီလောက်နဲ့ နားလိုက်မယ်နော် ..
အိုင်တီမုဆိုးရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ လက်ရာလေးတွေပါ...အားပေးခဲ့ကြပါနော်..
<<<ကျေးဇူးလို့ကြောနော်.. မုဆိုးကလေးနဲ့ ခွင်းမှာတဲ့ဂျ...>>>အောင်အောင်(မကစ) ရဲ့ ဘလော့ခရီးသည်လေးအား အားပေးနေကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်.. တုန့်ပြန်မှုအနေနဲ့ fb like လေးတော့ လုပ်ပေးခဲ့ကြပါနော်.. တတ်စွမ်းသမျှ တွေ့ ရှိသမျှလေးတွေကို ပြန်လည် မျှဝေနေပါ့မယ်...။ အဆင်မပြေတာများရှိခဲ့ပါက...cbox မှာ ပြောခဲ့ကြပါနော်..
ခွိခွိ ..ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျ .. ( လေးနဲ့ခွင်းမှာစိုးလို့) ..